Ndi Social Media bu uzo SEO? | Martech Zone
Tuesday, May 17, 2011 Tọzdee, Ọktoba 27, 2011 Tim Piazza
Ọ bụghị ihe a na-ahụkarị maka ndị ọkachamara n'ahịa ịzụ ahịa iji kwurịta ma kesaa usoro maka itinye usoro mgbasa ozi mgbasa ozi dị ka atụmatụ SEO. N'ụzọ doro anya, imirikiti okporo ụzọ weebụ ahụ nke na-amalitebu na engines na-akwalite ugbu a site na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, yana maka ndị na-azụ ahịa n'ime, enweghị ike ileghara nnukwu okporo ụzọ a anya.
Ma, ọ bụ ihe ntụgharị uche na-adọrọ adọrọ ịdọrọ ahịa mgbasa ozi na-elekọta mmadụ n'okpuru nche anwụ nke atụmatụ SEO. N'eziokwu, enwere ihe ị nwere ike ime mgbe ị na-eme mkpọsa mgbasa ozi mgbasa ozi nke ga-enwe mmetụta dị mma na SEO (akara tweets, dịka ọmụmaatụ) mana mgbasa ozi mgbasa ozi gbasara ihe karịrị ịzụlite visibiliti na nsonaazụ ọchụchọ engine.
Iji mara mma (ma kpọọ onye na-akwado ekwensu m) enwere nnukwu uru na ịnweta aha gị n'ọtụtụ nyocha na saịtị nyocha dị ka o kwere mee n'ihi na ọ ga-ekwe omume na mgbe mmadụ na-achọ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ, amaokwu gbasara azụmahịa gị na ndị a elu okporo ụzọ saịtị nwere ike ịkụ aka onye asọmpi na ibe mbụ. Mgbe ọ mere, nke ahụ bụ mmeri.
Ma merie ma ọ bụ na ọ bụghị, ọ bụ egwuregwu na-ezighi ezi. Mgbe gi na ndi mmadu na emekorita ndi mmadu na mgbasa ozi mgbasa ozi, ha abanyela n’onu gi. Ihe mgbaru ọsọ abụghị mmata n'oge a. Search bụ uru dị ogologo nke nsonye, ​​mana ọ bụghị ihe kpatara ịme ya. Mgbe ị na-arụ ọrụ na mgbasa ozi mmekọrịta, ị na-emeworị ntụkwasị obi, na-amụ banyere mkpa na ọdịmma nke ndị ahịa gị, na ọnọdụ ị ga-eme. Ọ bụrụ n’ị lekwasịrị anya na uru SEO, ị na-ele bọọlụ na-ezighi ezi.
SEO na mgbasa ozi mgbasa ozi bụ ọrụ dị mkpa maka ịga nke ọma n'ịntanetị ma ha na-arụ ọrụ egwu, dị ka alụmdi na nwunye. Ejikọtaghị ha n'apata ụkwụ. (ihe osise nyere Od Odden)
Mee 17, 2011 na 3: 32 PM
Ihe niile dabere etu ị si akọwa SEO.
ọ bụrụ na ị na-ekwu na ị na-eme ka saịtị dị mma maka ụfọdụ kwds SM agaghị abụ nnukwu enyemaka dị ka a ga - asị na ị na - ekwu na ị na - akachasị njikarịcha web jikọtara na azụmahịa gị.
Mee 17, 2011 na 5: 41 PM
Echere m na ị na-ezo aka na ọdịiche dị n'etiti na ibe na peeji nke kachasị ahịrịokwu kachasị mma. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ ka bụ SEO ọ bụghịkwa mgbasa ozi mgbasa ozi. Mmemme mmekọrịta ọ bụla na-eme na saịtị ma edepụtara ya ga-enyere gị aka ịme ka njikarịcha na saịtị gị, dịka ọrụ ọ bụla na-eme na saịtị ma edepụtara ga-enyere aka na njikarịcha saịtị gị. Isi ihe dị mkpa bụ ka doo anya na ọrụ gị - ị na-akwọ ụgbọala, ma ọ bụ njikọ aka?
Mee 18, 2011 na 4: 33 AM
Daalụ, Lee. Akụkọ eMarketer na-egosipụtakwa ahụmịhe m dịka onye na-azụ ngwaahịa. Ekwenyesiri m ike na nsonaazụ ya ga-adị iche mgbe ị na-ele ahịa dị ka ụlọ oriri na ọ restaurantsụ mobileụ, ebe mmadụ / ekwentị mkpanaaka na-enye nnukwu onyinye maka mmetụta ndị ahịa.
Mee 19, 2011 na 8: 15 AM
ee na-elekọta mmadụ media bụ seo atụmatụ… ọ na-enye ndị ọzọ ikpughe site na-ekere òkè isiokwu, posts n'etiti enyi..nke na-enyere dịkwuo okporo ụzọ..iji Social media na njikọ mmepe bụ bara uru na abụrụ usoro ..
Mee 19, 2011 na 3: 41 PM
Alok, ị na-egosiputa isi okwu gị site na ịwepụta njikọ na azụmahịa SEO site na ikwu okwu mmadụ. Nke a na-ajụ ajụjụ… ị na-etinye m na mkparịta ụka, ma ọ bụ na-eji usoro mgbasa ozi ọha na eze mee ka ị mata? Njikọ azụ a ọ bara uru karịa ohere isoro gị nwee mkparịta ụka nke na-ewulite mmekọrịta ma na-ewulite ntụkwasị obi? Sharingkekọrịta njikọ njikọ na-akpaghị aka na-egosi gị dịka onye nwere mmasị na SEO uru nke usoro mmekọrịta mmadụ?
I nwekwara ike na-akọwapụta ihe m kwuru, na mgbasa ozi mmekọrịta na SEO chọrọ ụzọ dị iche iche iji dị irè. Site na SEO, ihe ọkụkụ na-emezu ebumnuche. Iji usoro mgbasa ozi iji gbanwee m ka m bụrụ onye ahịa ga-achọ karịa okwu na njikọ. 🙂
Mee 19, 2011 na 6: 28 PM
O di nwute, aghaghi m ihichapụ ihe Alok kwuru n'ihi na ọ gbalịrị ịtụba backlink nke crappy!
Mee 20, 2011 na 2: 06 PM
Echere m na Alok mere isi m maka m, ka emechara. Maka onye na-elekwasị anya na SEO, usoro mgbasa ozi bụ usoro ọzọ maka imejuputa usoro njikọ ha. 🙂
Ọkt 24, 2011 na 1:56 PM
n'ihi na m na ọ bụ a atụmatụ .. ewu a na-elekọta mmadụ obodo maka ihe dị mfe mgbasa ozi nke azụmahịa gị. n'ihi na ndị mmadụ na-elekọta mmadụ nwere ike ịbụ ezigbo isi iyi nke costumers.